Home Wararka Puntland oo xukuno kala duwan ku riday dhalinyaro ka ganacsata mandooriyaha
Maxkamadda Darajada 1-aad ee Gobolka Nugaal ee Puntlan ayaa maanta xukun ku riday dhalinyaro Dadka ku dhici jiray magaalada Garoowe & Kuwo ka ganacsan jiray mandooriyaha xashiishka oo ay ciidamada boolisku kusoo qabteen howlgallo qorsheysan ay ka sameeyeen Magaaladaas.
Taliska boolika Gobolka ayaa sheegay in iyaga oo ku guuda jira howlgallo ay usuurta gashay inay gacanta kusoo dhigaan, waxaana ay maanta Maxkamadda Gobolka Nugaal ku riday xukuno kala duwan.
Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Nugaal G/Sare Xussen Cali Maxamuud Ayaa Sheegay inay hayaan kuwo kale oo hubkaan qarkood lagu soo qabtay isagoo sheegay in dhawaan ay sharciga ay horgayn doonaan.
Sidoo kale, wuxuu sheegay taliyaha in kuwo kalena ay xogtooda hayaan ciidamadu islamarkaana ay ku daba Jiraan Isaga oo xusay in cidii lagu qabto falalka noocan oo Kale in sharciga la horgayn doono, bulshaduna si ay u Baratana la shaacin doono Wajiyadooda.
Ugu dambeyn, G/sare Xussen Cali Maxamuud taliyaha booliska gobolka Nugaal ayaa u Mahadceliyay ciidamada booliska ee shaqada adag Ku Jira, Iyado lagu guda jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan, wuxuuna Sidoo kale u Mahadceliyay Bulshada Sida ay lamaha ammaanka ula shaqeyaan.
Previous articleShacabka iyo dhaqanka reer Gaalkacyo oo martiqaad u fidiyay Axmed Karaash
Next articleMaalqabeynka weyn ee reer Somaliland oo dhaliilay qaaraanka Midowga Yurub
Howlgalo Al-shabaab ka dhan oo bilaawday (Aqriso)
Musharaxiinta doorashada Puntland oo walwal ka muujiyay hanaanka qabanqaabada doorashadda